Iindaba -Iingcebiso ezi-4 eziBalulekileyo xa uthenga iBhetri eLungileyo yeForklift okokuqala
Ngaba ujonge ibhetri efanelekileyo ye forklift yakho? Emva koko uze kwiphepha lasekunene! Ukuba uxhomekeke kakhulu kwiimfoloko ekusebenziseni ishishini lakho lemihla ngemihla, ke iibhetri ziyinxalenye ebalulekileyo yelinge lakho. Ukukhetha uhlobo olufanelekileyo lweebhetri kunempembelelo enkulu kwinkqubela phambili yenkampani yakho.
Ukuphepha ukukrazulwa xa uthenga Ibhetri ye forklift okokuqala, khangela nje ezi ngcebiso zimbalwa ziluncedo:
Khetha uhlobo lolwelo lwebhetri
Kuyabonakala ukuba, zimbini iintlobo onokukhetha kuzo xa uthenga ibhetri yeforklift-lead-acid ibhetri kunye neLithium Ion. Zombini zahlukile kuseto lwazo, amaxabiso, ukubiza imfuneko, kunye nohlobo lwenkqubo. Ibhetri ekhokelela kwi-asidi isebenzisa i-electrolyte ukuvelisa amandla ngokuphendula kwamachiza phakathi kwe-acid ye-sulfuric kunye neepleyiti zokukhokela. Ikwafuna ukunkcenkceshela rhoqo, ngaphandle kwayo ibhetri iya kusilela kwangaphambi kwexesha. Kwelinye icala, iLithium Ion yitekhnoloji entsha ethe kratya kunamandla amakhulu kune-lead-acid. Oku akufuneki kugcinwa okunkcenkceshelayo, ukuvumela ukuba zisebenze ngakumbi ngakumbi kwimisebenzi emininzi yokutshintsha.
Chonga imeko yakho yokusebenzisa
Iibhetri zihlala zihluka nge iiyure ezininzi. Iibhetri ze-lead-acid zithatha malunga neeyure eziyi-8 ukutshaja kunye nezinye iiyure eziyi-8 zokupholisa. Ngokungafaniyo neebhetri zeLithium Ion, zithatha kuphela i-1 ukuya kwiiyure ezi-2 ukutshaja kwaye akusekho sidingo sokuphola kwakhona. Ngale nto, kuya kufuneka ubeke imeko yakho yokusetyenziswa kwangaphambili ukuthintela naziphi na iingxaki kunye neendleko ezingeyomfuneko ezinokuziswa yile nto.
Funda malunga neenkqubo zokutshaja
Kubaluleke kakhulu ukuba ulandele inkqubo yokutshaja yeebhetri zakho ze forklift ukwandisa ubomi babo bebhetri. Qiniseka ukuba usebenzisa itshaja elungileyo ukuba iibhetri zakho zisebenze ngokufanelekileyo. Umgaqo oqhelekileyo wesithupha xa kuziwa ekuhlawuliseni ibhetri kwifolokhwe ukuphinda uyihlaziye emva kokutshintsha kweeyure eziyi-8 okanye xa ikhutshiwe ngaphezulu kwe-30%. Ukutshaja rhoqo kunye nokusika umjikelo wokutshaja mfutshane kunokunciphisa kakhulu ubomi bebhetri yeforklift, ke qiniseka ukuba uyitshaje ngokupheleleyo yonke imihla. Okungakumbi, jonga ubushushu bebhetri xa utshaja ukuze ufumane iirhafu ezifanelekileyo zerhafu.
Ukuthenga ibhetri ye forklift engafiki newaranti konke konke ngumbono ombi kwaphela. Kuya kufuneka ufumane iyunithi enewaranti ende yokuqinisekisa ukuba imiba yasemva kokuthengisa isakhathalelwe kakuhle. Emva kwayo yonke loo nto, iwaranti isebenza njengokukhusela kwakho xa iyunithi ihlangabezana nazo naziphi na iingxaki. Ukuba isagutyungelwe yile waranti, ungatsalela umnxeba iziko lenkonzo ukukunceda nokusombulula umba.
Soloko uzithathela ingqalelo ezi ngcebiso ziluncedo xa uthenga ibhetri yeforklift okokuqala ngqa. Kukho iitoni zezinto ekufuneka uzikhumbule, kodwa ngokuqinisekileyo ziya kukukhokelela ekufumaneni iibhetri ezifanelekileyo zefolokhwe yakho. Ayikokuchitha ixesha ukuqonda ezi ngongoma, kuba uya kuba nakho ukugcina imali ngakumbi kwaye ukhokelwe ngokufanelekileyo ekufumaneni iibhetri eziza kuba luncedo olukhulu emsebenzini wakho.
I-DCNE ngumthengisi wobuchule kwiibhetri zeefolkhi kunye neeshaja. Iimveliso zethu zezona zikhethekileyo kuwe. Nasiphi na isidingo osifunayo okanye nayiphi na imibuzo onayo, nceda unxibelelane nathi ngokukhululekileyo.
Ixesha Post: Jul-12-2021